प्रचण्डले विछाएको ‘एम्बुस’बाट बालबाल बाँचे देउवा — Imandarmedia.com
प्रचण्डले विछाएको ‘एम्बुस’बाट बालबाल बाँचे देउवा
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विछाएको एम्बुसबाट बालबाल बाँचेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा देउवाले यस्तो कुरा बताएका हुन्।
सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्रले बिहीबार नै सरकारलाई अल्पमतमा पार्नका लागि एम्बुस थापेको सूचना बालुवाटार पुगेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सभामुखलाई आग्रह गरेर प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्न लगाएको खुलेको छ।
एमालेका नेताहरुसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादीका २८ जना सांसद उभिएर एमसीसीमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मतविभाजन माग्ने र सरकारको प्रस्ताव अल्पमतमा पार्ने तयारीको सूचना आफूले पाएपछि बैठक रोकाइएको बताएका हुन्।
कांग्रेस र एमालेको छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘प्रचण्डले बुधबार नै सभामुखसँग भेटेर योजना बनाइसकेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले पाउनुभयो।
उहाँले सरकार अल्पमतमा पार्ने सूचना पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भयो भनेर सभामुखलाई संसदको बिहीबारको बैठक सूचना टाँसेर रोक्न आग्रह गर्नुभएको हो।
प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने तय थियो। माओवादीका २८ जना सांसद उभिएर मत विभाजन माग्ने र सभामुखले मत विभाजन गराउनेगरि तयारी भएको सूचना प्रधानमन्त्रीले पाए।
माओवादीका २८ जना सांसद को–को उभिने भन्ने पनि तय भइसकेको थियो। सामान्यतः सैद्धान्तिक छलफलमा मत विभाजनको कुरा अउँदैन। तर २८ जनाले मत विभाजन मागेपछि,
एमालेको अवरोधकाबीच समभामुखले सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सरकारको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्ने अवस्था आयो। माओवादीको एम्बुसबाट जोगिन आफूले संसद रोकेर एमालेसँग सहमतिको हात बढाएको प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेका छन्।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई सभामुख अग्नि सापकोटासँग भेट्न पठाएका थिए। एमालेसँग प्रधानमन्त्रीको वार्ता भइरहेका बेला गृहमन्त्री सभामुखसँग वार्तामा थिए।
सभामुखसँग के कुरा भयो भन्ने औपचारिक जानकारी दिइएको छैन,तर सभामुखका कारण सरकारको प्रस्ताव अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएको, प्रमुख प्रतिपक्षले सदनको कारवाहीमा भाग लिन नपाएको जस्ता कारणले गर्दा मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।
सभामुखले मार्ग प्रशस्त नगरे प्रमुख प्रतिपक्षलाई संसदको कारवाहीमा भाग लिने वातावरण बनाउनका लागि सभामुख हटाउने एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस बाध्य भएर सहमत हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
त्यसका लागि बाबुराम भट्टराई समेत सहमत हुने संकेत उनले एमालेभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गरेर दिएका छन्। तेस्तै,सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुबीचको छलफल सकिएको छ।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संसदमा एमालेले जारी राखेको अवरोध खुलाउने विषयमा सहमति भएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्न एमालेको साथ मागेका थिए। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुले जे मुद्दा उठाएर संसद अवरोध गरेको छ।
त्यो विषय संबोधन नभएकाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने बताएका संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए।यद्यपि संसदलाई खुलाउने विषयमा सहमति भएको उनको भनाई छ।
साथै, संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने सहमति पछि भएको थियो। बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार एमाले र कांग्रेसबीचको छलफल सकारात्मक छ।
भोली शुक्रबार संसदमा एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफल गर्न एमाले सहमत भएको छ।बैठकबाट निस्केर पत्रकारसँग कुरा गर्दै कार्कीले ४८ सालदेखिको संसदीय अभ्यासमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक छलफलमा मत विभाजन गरेर लैजाने परम्परा नरहेको बताए।
उनले भने, सरकारको प्रस्तावलाई यसरी मत विभाजन गर्न थाल्यौं भने भोली कुनै पनि सरकारको प्रस्तावमा छलफल नहुने परिस्थिति आउने छ। किनभने बहुमत नभइकन सरकार बन्दैन।
बहुमतप्राप्त सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल नभए त्यो संसदको के काम ? प्रतिनिधिसभाको के काम ? त्यसैले भोलीको वैठकमा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुनेछ।
माओवादी केन्द्रले एमसीसीमा छलफल गर्न मत विभाजन माग्ने तयारी गरेपछि आजको बैठक स्थगित भएको थियो। उनले गहन र सार्थक छलफलबाट एमसीसीलाई निस्कर्षमा पुर्याउने विषयमा छलफल भएको बताए।
संसदको अवरोध खुलाउनका लागि एमालेले राखेका अडानमा कांग्रेस लचक भएपछि दुई पार्टीबीचको वार्ता सकारात्मक भएको नेताहरले बताएका छन्।
थप रणनीति बनाउन एमालेका नेताहरु अध्यक्ष केपी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा थप छलफलका लागि जुटेका छन्। वार्तामा सहभागी एमालेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सदनमा एमालेको सहभागिताका सन्दर्भमा आफूहरुले उठाएका मागप्रति
प्रधानमन्त्री सकारात्मक बने पनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताए। उनले आफूहरु थप छलफलका लागि अध्यक्ष ओलीको निवासमा आइपुगेको बताए। कांग्रेस र एमालेबीच शुक्रबार विहान पुनः छलफल हुँदैछ।